Watermark: inona izany, maninona no zava-dehibe ary ahoana no fomba hamoronana azy tsikelikely | Famoronana an-tserasera
Watermark: inona izany, maninona no zava-dehibe ary ahoana no fomba hamoronana azy tsikelikely
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao no nahita mari-drano amin'ny sary sasany. Imbetsaka, ireo dia mifanindry amin'ireo sary karama, satria manakana ny fampiasana azy ireo maimaim-poana (ary miaro ny zon'ny mpanoratra azy ireo). Fa ny sasany kosa ny mari-drano dia napetraka mba hanao doka na hanamboatra sarisary famolavolana tranonkala aza.
fa, Inona no tena mari-drano? Inona no maha-zava-dehibe azy? Inona no fampiasana azy? Izany rehetra izany sy ny maro hafa koa dia horesahintsika manaraka.
1 Inona no mari-drano
2 Nahoana no zava-dehibe ny mari-drano?
3 Aiza no hametrahana ny mari-drano
4 Ireo mari-drano ampiasaina indrindra
5 Ahoana ny fomba hamoronana mari-drano tsikelikely
5.1 Mamorona mari-drano ao amin'ny Photoshop
5.2 Ahoana ny fomba hamoronana mari-drano amin'ny Word
Inona no mari-drano
Ny mari-drano iray dia hafatra sisa tavela eo amin'ny sary ary manome mpanoratra na anaran'ilay olona na orinasa manan-jo hanana izany sary izany.
Amin'ny teny hafa, dia ny sary famantarana, hajia, sonia, anarana ... izay mikarakara ny fampiasana ny sanganasa niomerika, fiarovana an'io olona na orinasa io sy ny tombontsoany.
Tamin'ny voalohany, ny mari-drano dia napetraka amin'ny faritra izay tsy nisy nanelingelina ny fahitana ny sary. Saingy miha-mahazatra ny fampiasana azy ireo amin'ny mangarahara fa miorina amin'ny faritra hita maso be, miverimberina matetika, miaraka amin'ny tanjona mba tsy hanapahan'ny olona ny fari-drano hampiasana ny sary, ka hialana amin'ny zon'izay manao na mampivarotra azy.
Nahoana no zava-dehibe ny mari-drano?
Alao an-tsaina hoe naka sary ianao ary nahafinaritra. Ampakarinao amin'ny tambajotra sosialy hizara ny kanto sy ny fahaizanao amin'ireo olona anananao. Ary, afaka andro vitsivitsy, na herinandro, na volana vitsivitsy, dia hitanao ny sarinao. Ao anaty boky, amin'ny pejin-tranonkala, eny fa na amin'ny banky sary aza izay miantoka ny sarinao izay nahazoanao vola x. Vola izay tsy hiditra am-paosinao.
Azo antoka fa ho tezitra ianao, satria sarinao io. Ary mandreraka, mahasosotra ary saika tsy azo atao mihitsy ny miady amin'ny Internet hamafana ny soritra rehetra ao aminy. Ankoatr'izay raha miditra amin'ny mpisolovava ianao dia mety ho lafo izany.
Betsaka ampiasao ny watermark ho fomba iray hiarovana ny zon'ny mpamorona, na zon'ny mpamorona, izay manao ny sary. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ezahina ny hanakivy ny hafa tsy hampiasa an'io sary io satria arovan'ny mpanoratra azy io.
Midika ve izany fa tsy hisy hampiasa ny sarinao? Tsia, voalohany satria afaka mangataka alalana aminao izy ireo hampiasa izany ary hanome azy ireo; ary faharoa satria mety ho fomba fizarana amin'ny fampiasana mari-drano manampy amin'ny fampiroboroboana pejy web, marika manokana, sns.
Ohatra, alaivo sary an-tsaina hoe manana orinasam-pamoronana tranonkala ianao. Ary mamorona sary samihafa amin'ny maodely izay ataonao hampahalalana ny tenanao ianao. Ireo sary ireo dia mety mitondra a mari-drano izay manao dokam-barotra amin'ny pejinao mba hahafantaran'ireo olona izay tianao ny toerana hahitana anao.
Aiza no hametrahana ny mari-drano
Tsy marina ny toerana misy ny mari-drano. Ary tsy voatery hametraka azy amin'ny toerana raikitra amin'ny sary. Ho toy ny tolo-kevitra dia lazaina foana fa tsy maintsy apetrakao amin'ny ampahany izay tsy manelingelina ny fahitana ny sary, fa miaraka amin'izay dia mankasitraka azy.
Izao dia manana olana izany. Mieritrereta sary iray izay misy mari-drano eo amin'ny farany ambany ankavia. Tsy manelingelina ny fahitana ny sary izany. Fa ny "hendry" sasany dia afaka maka ny sary, manangona azy ary mampakatra azy amin'ny Internet na mampiasa izany ho tombontsoany manokana.
Ka na dia ny toerana tsara marika indrindra dia ny faran'ny ambany amin'ny sary (indrindra amin'ny ankavanana), na amin'ny lafiny rehetra, dia mahazatra kokoa ny mametraka azy ireo eo afovoany, na miverimberina manerana ny sary mba hialana amin'ity "fikafika" ity ary hiarovana tsara kokoa ny sary.
Ireo mari-drano ampiasaina indrindra
Ary miresaka karazana mari-drano, Fantatrao ve fa mety misy karazany maro? Efa niresaka momba ny sasany amin'izy ireo isika, saingy, raha hazavaina, izy ireo dia:
Watermarks mangarahara. Tena mandaitra ary azo apetraka eo afovoan'ny sary tsy manelingelina ny fahitana azy.
Logo an'ny orinasa. Na ny marika manokana anao, hanao doka miaraka aminy.
Tanana ara-barotra. Toy ny hoe mamorona sonia ho an'ny famoronana Internet ianao. Mety ho toy ny sary famantarana anao koa izy io.
Watermark miverimberina. Ny fampiasana ny famolavolana marika mitovy matetika amin'ny sary. Izany dia mahatonga ny sary tsy hahita intsony, saingy miaro azy bebe kokoa.
Ahoana ny fomba hamoronana mari-drano tsikelikely
Hifantoka amin'ny fomba fametrahana mari-drano amin'ny sarinao izahay. Misy fomba maro isan-karazany amin'ny famoronana mari-drano, na amin'ny rindrambaiko izany na amin'ny Internet.
Raha misafidy programa ianao dia lojika izany ireo fanovana sary dia mamela anao hamorona azy, ohatra Photoshop, GIMP, Microsoft Paint ... Fa ny hafa koa toa ny Word. Eny, ireo dia azo inoana fa tsy dia fahita firy, saingy azo atao ihany.
Etsy ankilany, manana ianao pejy an-tserasera izay manampy anao mamorona mari-drano amin'ny sarinao. Iray amin'ireo fanta-daza indrindra i PicMarkr, fa misy koa ny hafa toa ny Postcron, IloveIMG, Visual Watermark ... Tsotra ity dingana ity satria tsy hampakatra ny sary fotsiny ianao ary hamorona ny marika tadiavinao amin'ireo fitaovana ireo.
Mamorona mari-drano ao amin'ny Photoshop
Raha mampiasa Photoshop ianao dia hamela anao ireo dingana tokony hataonao hamoronana azy. Ireo dia mety hitovy amin'ny programa fanovana sary hafa toa ny GIMP.
Voalohany, mila manokatra ny sary ianao amin'ny Photoshop. Avy eo manokatra rakitra vaovao hafa, manodidina ny 800 × 600 ary miaraka amina mangarahara.
Ao amin'io segondra io dia mila amboary ny marika tadiavinao, na sonia, anarana, tranokala, orinasa, logo anao ... safidio ny loko tadiavinao ary, rehefa vita, apetaho ny takelaka rehetra (mba tsy ho very ny valiny farany rehefa maka tahaka azy ianao.
Ary farany, ilaina ny mampita izany amin'ny sarinao, na miaraka amin'ny fitambarana "Kopia" sy "Mametaka", na amin'ny fikitihana ny mari-drano ary sintomy mankany amin'ilay sary hafa nosokafanao.
Izao dia mila mitady azy fotsiny ianao dia ho vonona.
Manoro hevitra anao izahay mba hitahiry ilay rakitra izay namoronanao ny sary ho mari-drano ka, rehefa mila apetrakao amina sary maromaro ianao dia azonao atao izany fa tsy mila mamorona azy avy hatrany.
Ahoana ny fomba hamoronana mari-drano amin'ny Word
Iza no miteny hoe Word says Excel, PowerPoint ... na programa mitovy amin'izany (LibreOffice, OpenOffice ...). Ireo sonia ireo dia mety ho somary ifotony kokoa, ary mifantoka amin'ny antontan-taratasy ihany, fa izy ireo koa dia azo ampiasaina hanehoana ny sangan'asa ary te-hametraka ny mpanoratra ny sary.
Amin'ity tranga ity dia tokony handeha ianao «Volavola» / «Watermark». Hanokatra varavarankely izay ahafahanao misafidy ny fomba fametrahana ny mari-drano, mitsivalana, diagonaly ... ary koa ny lahatsoratra izay hapetrakao.
Ity mangarahara ity dia mangarahara ary tsy hanasarotra ny famakiana ny soratra fa ho hita eo.
Ary raha te-hametraka azy amin'ny sary ianao? Eny, tsy maintsy mankany amin'ny Insert / Image ianao. Apetraho ny sary ary, amin'ny safidiny, safidio ny fikirakirana "mitohy". Amin'ity fomba ity dia afaka manoratra lahatsoratra ianao. Ampiasao fotsiny ny habaka sy ny lahatsoratra (azonao atao ny manitatra azy io ho lehibe kokoa, kely kokoa, loko, endritsoratra samihafa ...).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Watermark: inona izany, maninona no zava-dehibe ary ahoana no fomba hamoronana azy tsikelikely